Ciidamada Booliska Soomaliland ayaa howlgallo kala duwan oo ay sameeyeen ayaa waxaa ay gacanta ku dhigeen Khamri - Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Ciidamada Booliska Soomaliland ayaa howlgallo kala duwan oo ay sameeyeen ayaa waxaa...
Ciidamada Booliska Soomaliland ayaa howlgallo kala duwan oo ay sameeyeen ayaa waxaa ay gacanta ku dhigeen Khamri
howlgallo kala duwan oo ay sameeyeen ayaa waxaa ay gacanta ku dhigeen Khamri farabadan oo Gaari lagu waday iyo Shaqsi ka Ganacsanayay.
Ciidamada ayaa howlgalka waxaa ay sigar ah uga fuliyeen Aaga xaduudka degaanka faraweyne ee Gobolka Maroodi-jeex, waxaana saraakiisha Booliska ay sheegeen in Khamriga uu ka kooban yahay 675 litir oo dhalooyin kujira.
Sarkaal u hadlay Taliska Ciidamada Booliska Soomaliland ayaa sheegay in Khamrigan ay Ciidamada qabteen lagu qiimayay in lagu soo iibiyay lacag dhan 24.000 oo Dollar, isla markaana Ciidamada ay ka hortageen, iyada oo gaari lagu waday.
Sidoo kale Sarkaalka waxaa uu sheegay in degaannada Soomaliland lagu soo qaaday dagal, sida diita, Dhaqanka iyo dadnimada, waxaana uu ugu baaqay in dadweynaha ku nool degaannada Soomaliland inay kacaan.
Ciidamada Booliska Soomaliland ayaa dhowr jeer oo hore waxaa ay howlgallo kala duwan ay ka sameeyeen degaannada somaliland kusoo qabteen khamri farabadna iyo dad ka Ganacsanayay, kuwaas oo qaarkood la xukumay.
Previous articleXisbiga Kulmiye iyo garabkii Ucid oo soo bandhigey masuuliyiinta ku matali doonta shirgudoonka golaha wakiilada somaliland.
Next articleDHAGEYSO:- Warka Duhur ee idaacadda wardeeq 17-07-2021